Birthday Wish By Prime Minister (June 19/2021) – PVTV Myanmar
Birthday Wish By Prime Minister (June 19/2021)
2021-06-19 at 8:26 PM
မဂ်လာပါ ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်
2021-06-19 at 8:32 PM
Happy Birthday!!! Our great Leader 🎂🌹❤️
May our leader free from military terrorist group' unjustified detainment as soon as possible.
Thar Thar Show says:
2021-06-19 at 8:33 PM
Happy Birthday Our Leader !!!!
2021-06-19 at 8:35 PM
အ​မေစု အသက် ၁၂၀ တိုင်ရှည်​စေ​သော်
ANann Tyui says:
2021-06-19 at 8:39 PM
2021-06-19 at 8:43 PM
2021-06-19 at 8:59 PM
ချေးစားခွေးတွေ့ ဒီနေ့ ၁၉ ရက်မှာအူတာ
အေမ အျမန္ျပန္လြတ္ၿပီး မိသာစု နဲ႔ အတူေပ်ာ္ရႊင္စြာ အျမန္ဆုံးျပန္ေနနိင္ ပါေစ။ အေမ အသက္ရာခ်ည္႐ွည္ ၿပီး က်န္မားခ်မ္းသာစြာေန နိင္ပါေစ။
2021-06-19 at 9:03 PM
Zinminoo 2021 says:
2021-06-19 at 9:04 PM
Happy birthday . May Su😘😘
အမေစု အမြန်ဆုံး လွှတ်မြောက်ပါစေခင်ဗျာ..
Mr Myo Min Than says:
Nay Honey Linn says:
2021-06-19 at 9:19 PM
We love Daw Aung San Suu Kyi.
အေမစု ခ်စ္တဲ့ျပည္သူေတြနဲ႔က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖတ္သန္းႏိုင္ပါေစ 🌹🌷🌹🌷🌹
Paing sithu ko Hulk says:
Happy birthday to our leader! May he lead the country and the nation from his birthday for many years to come. Let the enemies fall because of the love of the people.
2021-06-19 at 9:40 PM
We love Daw Aung San suu Kyi NUG CRPH PDF and national ethnic
Kyawhi Zin says:
2021-06-19 at 9:42 PM
မအလ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ တေန႔ ေသျခင္းဆိုးႏွင့္ မသာေပၚမည့္အေကာင္ေတြ
မတရားအမႈ႕ဆင္ေနတဲ့ စစ္ေခြးေဘာရက္ (မတရားသူႀကီး )ေတြလည္း ေကာင္းေကာင္း ထမင္းဝေအာင္စားထားၾကေဟ့
2021-06-19 at 9:52 PM
Mg Naung says:
zwelin htet says:
2021-06-19 at 9:56 PM
အမေစု ကျန်းမာအောင်သာနေပေးပါ ကျန်းမာစေဖို့လည်း ဆုတောင်းလျက်ပါ အမေ ❤️
2021-06-19 at 10:02 PM
Gaday Htun says:
2021-06-19 at 10:26 PM
ကျန်းမာပါစေ အမေ.Happy Birthday A May Su. 🎂
2021-06-19 at 10:30 PM
We Love Aung San Suu Kyi and NUG 😍😍😍
2021-06-19 at 10:58 PM
Happy Birthday, Our Leader DASSK 🌹🌹🌹🌹🌹🌹
Be healthy and come back to us
Please be known that we are waiting for your return.
2021-06-19 at 11:15 PM
2021-06-20 at 12:08 AM
2021-06-20 at 12:11 AM
2021-06-20 at 2:32 AM
May Daw Su be free soon and haveapeaceful future days with her beloved family and people.
2021-06-20 at 4:15 AM
2021-06-20 at 6:31 AM
NUG. ..failing to support so. ..
Chin state… Kayar state. ..အုံကြွ စဥ်မှာ…
လက်နက် ခဲယမ်း ကောင်းကောင်း
ထောက် ပံ့ သင့်ခဲ့ တယ်
ဒီ states တွေရဲ့…စားနပ်ရိက္ခာ လမ်း ကြောင်း တွေဖက်ဆစ် တပ်ကပိတ်ထား ချိန်မှာ လုပ်သင့်တာက…
1. မအလ ထောက်တိုင် တပ်ရဲ့ ပိတ်ဆို့ ရေး check point တွေ ကို နီးစပ် ရာ တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင်တွေ နဲ့ အဲဒီ အနီးအနား မှာရှိတဲ့ PDF တွေပေါင်းပြီး…ပိတ်ဆို့ check point တွေကို…အမြစ်ဖြတ် ခြေမှုံး သင့်တယ်..
eg. .AA + စစ်ကိုင်း pdf for Chin
KNU /SSA + ပင်လောင်း/ တောင်ငူ pdf for ကယား
2. စစ်ပြေး တွေကို..Chin. .india နယ်စပ် ကို ပို့
NUG. ..က…UNHCR. ..နဲ့…စစ်ပြေး တွေကို support လုပ်ဖို့ ချိတ်ဆက် ပေး
World Red Cross ရဲ့ အကူအညီ… MSF. .ဆရာဝန် များ…အကူအညီ..နဲ့..လူနာတွေ ကို ကုသ..
Supply တွေ မြန်မာ ဖက်က ပိတ်ရင်.. နည်းစပ် ရာ..India နဲ့ Thai
3. ကာကွယ် ရေး ဝန်ကြီး… ဌာန
ကို… ပြန် reform လုပ်
ကရင်..ကယား..ချင်း…များနဲ့ အစား ထိုး..
တယောက် နဲ့ တယောက်…ဒလံ လို့ မြင်ရင်…စည်းရုံး ရေး ပြိုကွဲ နိုင် ပေမဲ့…သတိတော့ ရှိရမယ်
ဦးဆောင် မှု ညံ့ဖျင်း.. ပြန်ရင်လဲ
ဒလံ လို့ ထင်ချင် စရာဘဲ..
စုပေါင်း ဦးဆောင် မှုနဲ့…အများ ဆန္ဒ တိုင်း ဆုံးဖြတ်…
ညံ့ဖျင်း သူ…သံသယ ရှိသူ…အားလုံး ကို…ဖြုတ်ထုပ်သတ်
အရေး မပါတဲ့…အပြင်စည်း..ကို ပြောင်းပြစ်…
eg. .ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ကို..ယဥ်ကျေး မှု ဝန်ကြီး အဖြစ် ပြောင်းတာ မျိုး…
စစ်တိုင်း မှုး ကို…lao သံမှူး အဖြစ် နဲ့ ပြောင်းလဲ ခန့်လိုက် တာမျိုး…
D- day က…ချင်းပြည်နယ် နဲ့ ကယားပြည် နယ်..အုံကြွ တုံး အော်သင့် ချိန်…now when will be DDay. …?????
kyaw yehtut says:
2021-06-20 at 9:18 AM
မင္းတုိ႔ဝရမ္းေျပးေတြက ဘယ္ေဂ်ာင္က ေဟာင္ေနျကတာလဲ ဖာစု ေမြးေန႔ျပီးရင္ ေသေန႔လာေတာ့မယ္
dhmmar yi123 says:
2021-06-20 at 5:04 PM
Thet lay says:
2021-06-20 at 10:59 PM
စောက်ခွက်ကိုဓါတ်မီးထိုးပီးVideoရိုက်ရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ် အမယ်လေး အားကိုးချင်စရာ
သက်မဲ့ပန်း ရဲ့ အရှိန်ကိုတောင် ကြောက်အားလန့်အား ဖြစ်နေကြပါသည် တဲ့ အမေ😌🌹😌
PVTV နဲ့ ဒေါင်းတို့ ပူးပေါင်းစီစဉ်တဲ့ “ရင်ဖွင့် နားစွင့် ပန်းတိုင်ဆီရွက်လွှင့်”…